Mahazo tohana avy amin’ny Fiangonana Ortôdôksa Rosiana ireo vondrona manohitra ny vaksiny any Balkana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Avrily 2020 15:15 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Shqip, Italiano, Ελληνικά, українська, English
Sergeev Pasad, tranon-drelijiozy Ortôdôksa iray eo akaikin'i Moskoa. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr mutatdjellyfish, CC BY-NC.
Nivoaka voalohany tamin'ny teny Makedoniana tao amin'ny Critical Thinking for Mediawise Citizens – CriThink ity tantara nosoratan'ny mpanao gazety Ljubomir Kostovski ity, ary nadikan'i Truthmeter ho amin'ny teny Anglisy, ireo roa ireo dia samy tetikasa avy amin'ny Fikambanana Metamorphosis avokoa. Avoaka etsy ambany ao anatin'ny sehatry ny fifampizaràna votoaty ny dika novaina tamin'ity lahatsoratra ity.
Tamin'ny Aprily 2019, nandray fanapahankevitra mikasika ny zon'ny Ray aman-dreny ny handà ny fanaovana vaksiny ny zanany ny Fiangonana Ortôdôksa Rosiana (ROC) tamin'ny alalan'ny Vaomiera Patriarika momba ny Raharaham-pianakaviana, Fiarovana ny Reny sy ny Zaza. Nanako nanerana ireo vondrona manohitra ny vaksiny any Balkana izany fanapahankevitra izany.
Milaza ilay fanapahankevitra fa ireo Ray aman-dReny dia “mitazona ny zo handray fanapahankevitra an-kalalahana, tsy misy fanerena momba ny fahasalaman'ireo zanany, tafiditra ao anatin'izany [ny mikasika] ireo vaksiny fisorohana” ary koa “tsy azo ekena ny fanenjehana ireo Ray aman-dReny tamin'ny fampiharany izany zony izany”, ankoatra ireo fepetra hafa mitovy amin'izany.
Afaka jerena ao amin'ny tranonkala Russian Faith izay avoaka, amin'ny tenimpirenena maro hafa ary toa fianakaviana roa tsy Rosiana no mpamatsy ara-bola, ireo fitaovana mampiako ny hevitry ny ROC mikasika izany lohahevitra izany.
Na mbola ny Fitondrana Patriarika foibe Firaisam-pinoana ao Constantinople aza no mitàna ny fahefàna faratampony amin'ny finoana Kristiana Ortodoksa, mampihatra dindo ara-politika lehibe amin'ireo fiangonana hafa manerana ny firenena ny Fiangonana Ortôdôksa Rosiana, indrindra any amin'ny firenena be mponina manana razambe Slavy.
Noraisin'ireo haino aman-jery Serba ilay fanapahankevitry ny ROC. Tamin'ny 25 aprily, namoaka lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Avy any Rosia ny Tafio-drivotra ao Serbia” ny vavahadim-baovao Intermagazin, izay nadika soratra hoe “Afaka mijery ny toerana ofisialy raisin'ny Fiangonana Ortôdôksa ireo mpino Kristiana Ortôdôksa Serba mandra-panaovan'ny fiangonan-dry zareo fanambaràna mikasika izany”.
Any Makedônia Avaratra, niteraka resabe ireo mpanohitra vaksiny taorian'ny nahatsapany fa tsy afaka nanoratra anarana any amin'ny sekolim-panjakana ny ankizy raha tsy misy porofona vaksiny. Miady amin'ny areti-mifindra kitrotro efa ho herintaona izaoy ilay firenena ary, tato ho ato, vao mainka napetraka ho hentitra kokoa ireo famerana amin'ny fisoratana anarana .
Nahazo sehatra ilay fomba fijerin'ny ROC mikasika ny fanaovana vaksiny nandritra ny fihaonambe iray tany Verona, Italia tamin'ny Martsa 2019 izay nokarakarain'ny Kaongresy Maneran-tany ho an'ny Fianakaviana, fikambanana Evanjelika Mpitahiry ny Nentindrazana avy any Etazonia. Nanao kabary mikasika izany hetsika izany ny Pretra Filoha Dimitry Smirnov, lehiben'ny Vaomiera Patriarikaly momba ny Raharaham-pianakaviana.
Tamin'ny Mey 2018, nampitandrina ny Southern Poverty Law Center, fikambanana tsy mitady tombontsoa izay manara-maso ireo vondrona mpanao an-tendro any Etazonia, fa io fikambanana io dia “sehatra iray tantaninà Amerikana mampiroborobo ny tombontsoa ara-politika Rosiana any Eoropa izay sady manome toerana fidirana ho an'ireo ôligarka Ortôdôksa Rosiana ho ao anatin'ny Tambajotra Evanjelika Kristiàna ao Etazonia”.
Tao anatin'izay taona vitsivitsy izay, tany amin'ireo Repoblika Sovietika taloha foana no nanaovana ilay fihaonambe. Natrehin'ny Praiminisitra lefitra Italiana Matteo Salvini ny andininy tamin'ity taona ity.
Nahita ireo mpikaroka izay nanadihady ireo fampielezankevi-pifidianana tany Kremlin fa matetika manao kabary manohitra ny vaksiny ireo tafikanà Rosiana mpisompoatra. Mikendry indrindra ireo firenena izay ananan'i Rosia tombontsoa jeopolitika izany karazana fampielezankevitra izany, hoy ilay fikarohana, mba hamafazana fizarazaràna sy handravàna ny fahatokisana amin'ireo andrim-panjakana any an-toerana.
Fanaparitahana fifandirana voarindra amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy
Nanao fanadihadiana momba ireo milina mibaiko tena sy ireo mpisompatra avy any Rosia izay mampiroborobo votoaty mikasika ny fahasalamana ao amin'ny Twitter ny ekipanà siantifika iray avy ao amin'ny Oniversiten'i George Washington, ny Oniversiten'i Maryland ary ny Oniversiten'i Jones Hopkins. Manasokajy ireo masinina mibaiko tena ho toy ” bots tantaninà rindrambaiko izay mibaiko tena kamitsinjara voatoaty tsy isalasalàna”, raha ireo mpisompatra indray dia faritana ho toy ny bika aman'endrika ivelany entin'ireo mpampiasa ka olona no mitantana azy amin'ny fampiasàna maripamantarana sandoka na tsy mitonona anarana.”
Nanadihady bitsika teo anelanelan'ny Jolay 2014 sy Septambra 2017 ireo fikarohana ireo. Navoaka tao amin'ny Gazety Amerikana ho an'ny Fahasalamam-bahoaka (AJPH) ireo fehinkevitra, famoahan-dahatsoratra nataon'ny Fikambanana Amerikana Ho an'ny Fahasalamam-bahoaka.
Tenifototra manohitra ny vaksiny
Nanomboka tamin'ny nanapahan'ny Facebook sy Instagram hevitra ny handràra ireo tenifototra mampiroborobo ny vaovao “azo hamarinina fa diso” mikasika ny vaksiny tamin'ny May 2019, nandray paikady fanodinkodinana saim-bahoaka vaovao indray ireo mpanohitra ny vaksiny, araka ny tatitra nataon'i Coda Story.
Talohan'ilay fanambarana nataon'ny Instagram, nampiasa tenifototra toy ny #vaccineskill ireo mpanohitra ny vaksiny ireo, raha toa ka ankehitriny, mampiasa tenifototra miafina toy ny #learntherisk na #justasking izy ireo, ary manoratra [ny teny] ‘vaksiny’ miaraka amin'ny “ç” (vaççines), na mampiasa faraingo kely (va((ines) mba tsy ho tratra.”
Fomba iray hafa fampiasain'ireo mpanohitra ny vaksiny mba hamitahàna ny fanarahamaso ao amin'ny Instagram ny fakàna ireo fomba fiteny ampiasan'ireo mpiaro ny zo amin'ny fanalàna zaza, toy ny #righttochoose sy ny #mybodymychoice
Ny fehinkevitra tamin'ilay fanadihadiana dia hita fa samy nanaparitaka viriosy (malware) sy votoaty mahasorena avokoa ireo rindrambaiko ireo. Miasa ho an'ny varotra ihany koa izy ireo fa tsy dia ho an'ny antony ara-ideolojika — raha fintinina dia mitarika mankany aminà tranonkala voafaritra manokana izy ireo.
Etsy an-daniny kosa, hita fa tena ara-politika amin'ny ankapobeny ireo hafatra alefan'ireo trolls ireo ary mikendry ny hamafy fisaraham-bazana eny amin'ny vahoaka ao Etazonia. Tsy ny hanohana mivantana ny lahateny manohitra ny vaksiny no paikady iraisana amin'izany, fa manolo-kevitra fa lohahevitra ara-drariny izay afaka ataon'ny vahoaka ny adihevitra manohitra ny vaksiny, izay mitrandraka ny fahadisoana lojika ao anatin'ilay fifandanjana diso, hoy ilay fikarohana nataon'ny AJPH.
Ny faharavan'ny fankasitrahan'ny vahoaka ny vaksiny sy ny fihenan'ny fahatokisan'ny vahoaka ny Fanjakana no vokatr'izany.
Manolo-kevitra ireo mpanoratra hoe mila fikarohana maromaro kokoa mba hahafantarana izay fomba hahafahan'ny politikam-pahasalamana miady amin'ilay votoaty aparitakin'ny rafitra mpanaparitaka vaovao tsy marina izay mampiasa rindrambaiko sy trolls.
Mifanaraka amin'ny fikarohana nataon‘ny DARPA tamin'ny 2015 ireo fehinkevitry ny AJPH, ny DARPA izay Masoivohom-Piarovana Amerikana misahana ireo fanamby mifandraika amin'ny teknolojia vaovao, nahita ireo rindrambaiko nanaparitaka fitaoman-dratsy tao amin'ny Twitter.
Hitan'ilay Masoivoho fa ny vaovao izay niparitaka nanerana ny tambajotra sosialy sy ireo vondrona fandefasana hafatra dia afaka mamorona sarintsarina adihevitra malalaka tsara andraisan'ny daholobe anjara, raha toa ka ny “hitondra dindo amin'ny fomba fihevitra” no tena tanjony amin'ny fampanekena ireo filazàna ara-tsiantifika nolavina, ary fanaovana azy ireo ho toy ny fenitra ara-dalàna ao anatin'ny fotoana itenenana amin'ny ankapobeny.
Nihena be mihitsy ny fanaovana vaksiny miady amin'ny kitrotro tany Makedonia Avaratra tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay. Sary avy amin'i @reflektor_mk, nahazoana alàlana.